राजनीति प्रती जनताको बितृष्णा कसरी हटाउने ? - Myagdi Online
राजनीति प्रती जनताको बितृष्णा कसरी हटाउने ?
1 बर्ष,2महिना अगाडि
प्रविन कुमार मल्ल
1289 पटक पढिएको
नेपाली काङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ । अब काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर देश र जनता र यो लोकतन्त्रको लागी कस्तो तरिकाले भूमिका खेल्छ्, यो अहिले समय को मुल सवाल यही हो ।
अनी हाल साल को निर्वाचन मा दुबै सदन , सात प्रदेश सभा लगायत अधिकांश स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति कम छ । अर्कातिर हाम्रो प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई तिहाई सहित देशको संबिधान लाई समेत आफु अनुकुल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था मा छ । अब यस्तो परिस्थिती मा नेपाली काङग्रेस साथ मा अब बाकी के छ ? अब हामी सँग नेपाली जनताको भरोषा मात्र बाकी रहयो । नेपाली जनता लाई आफ्नो पक्षमा पार्न जनताको मन, दिमाग जितेर जनतालाई प्रभाब पारी शक्ती सन्चय् गर्दै अधी बढ्नु नै एउटा मुल उपाय हो ।
नेपाली कांग्रेस जनताको आशाको केन्द्र बन्न काङ्ग्रेस लाई आफ्नो राजनितिक आस्थामा, आफ्नो सँस्कार, आफ्नो संककृति र मुल्य मान्यतामा हिडाउने काम सबै तह का हामिले गर्नुपर्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको शक्ती भनेको लोक्तान्त्रिक सस्कृती हो । अहिंसा को दर्शन नै काङग्रेस को ठुलो आधार र मान्यता हो । भौतिक शक्तिका आधार मा नभैइ नैतिक शक्ती लाई अँगाली अघी बढनु जरुरी छ ।
नेपाली काङग्रेसको सिद्वान्त सर्ब उत्कृष्ट हुने तर काङ्रेस चाही किन चुनाब मा हार्ने ? अन्तराष्ट्रिय क्षेत्र मा बिश्वासनियता र यसको ब्यापक जनाधार रहे पनि नेपाली काङग्रेस को सिद्वान्त ले बिजयि हासिल गर्न किन सकेन ! भने जनता ले काङ्ग्रेसको सिद्वान्त , आदर्श र ईतिहास लाई भन्दा हामी नेता, कार्यक्रताको आचारण र ब्यबहार लाई प्रत्यक्ष मुल्याङ्ग्न गरेको पाइयो । हामी नेता, कार्यक्रता लाई नै हेरेर काङ्रेस को मूल्यानकन गर्छ्न। यसको अर्थ हामी जो कोही नेता कार्यक्रता धर्मा छाडा, सँस्कार, आचारण बिमुख हुनुभएन । जनताको बिस्वास हासिल गर्न को लागी हामी सबै नेता कार्यक्रताहरु आफ्नो आचारण सँस्कार, सस्कृती लाई पालन गर्न सक्नुपर्छ । काङ्ग्रेसलाई बिगार्ने खाल को आचारण, अन्तर्घात गर्ने, सुद्रीन नसक्ने लाई किनारा लगाएर अधी बढ्नुको कुनै बिकल्प छैन ।
जुन तरिकाले युवा र आम जनता ले काङ्रेस र प्रजातन्त्र प्रती राखेको छ् स त्यो भरोसा भताभुङ्ग हुन नदिन तत्कालिन र दिर्घकालिन रुपमा पार्टिले सम्पन्न गर्ने बिस्तृत कार्ययोजना नबने सम्म काङ्रेस ले मुल दुई कुरा मा (एउटा सत्तालाई ठिक सँग चल्न सदन र सडक दुबै ठाउ बाट दबाब दिने र अर्को हो आफै अघिल्ला चुनाब मा भएका गल्ती कमजोरी हरु लाई निहाल्दै सुधार गरेर ठिक बाटोबाट द्ढ्र्तापूर्वक अगाडी बढ्नु हो ।
देश संघियतामा गईसको हुँदा, अब समृद्री को यात्रामा अगाडी बढ्न पार्टिले आफ्नै हैसियत र पहुचको आधार मा आर्थिक,सामाजिक क्षेत्र मा योगदान दिदै जानु पर्छ । काङ्रेस ले जितेको स्थानिय तहमा स्रोत परिचालन कसरी भएको छ ? लक्षित बर्ग कती लाभान्वित भए, योजना बाट खुद कती भौतिक लक्ष्य पुरा भयो ? कती काम हुन सकेनन ? जस्ता बिषय मा जनता सँग नजिकै बाट अन्तर्कृयात्मक सम्बन्ध राख्ने र सुसुचित गराउने काम गर्नुपर्छ।
केहि स्वतन्त्र हैसियत मा हुने पर्ने बिभिन्न निकाय हरु प्रधानमन्त्री मातहत लानु, यस्यो केन्द्रियताले स्वतन्त्र निकायलाई कमजोर बनाउछ । पुर्ण सत्ताले सम्पुर्ण रुपमै भष्ट् बनाउछ । बर्तमान बाम सत्ता को यो प्रबृत्ती बाट देश लाई जोगाउन नैतिक शक्ती राख्नुपर्छ । केन्द्रीकरण बामन्थी धर्म र निती हो । यस्ले अधिनायकबादलाई प्रस्य दिन्छ । यो सरकार ले संबिधान ले प्रदेश र स्थानिय तहलाई दिएका अधिकारहरु समेत केन्द मै खिचेर आर्थिक स्रोत र प्रशासनिक शक्ती को स्वच्छाचारी प्रयोग गर्ने छ्नक देखाएको छ । यसका बिरुद्व काङग्रेसले अब स्थानीय निकाय र जनता लाई सुसुचित गरी बैचारिक आन्दोलन उठाउनु पर्छ ।
यिनले सम्पुर्ण राज्य सयन्त्र कब्जा गर्ने मात्र हैन, सम्पुर्ण सामाजिक सयन्त्र नै नियन्त्रण मा राख्ने प्रायस गरिरहेका छ्न यसका निम्ती राज्यका स्रोत र साधन को दुरुपायोग गर्नेछ्न । त्यस्का बिरुद्व हामी सबै सजक भएर सकृयता बढाएर जनताको संघर्षलाई साथ दिनु पर्छ । समानाता र राष्ट्रियताका चर्को नारा लगाउदै आएका तर आफ्नो दलका कार्यक्रताको मात्र भरपोषण गर्दै राज्यमा यो बाम सत्ताको हालिमुली देखिएको छ । त्यस्को बिरुद्व जनतालाई सुसुचित गर्ने र जनतालाई जगाउने र साथ मा लिने काम काङ्रेस ले गर्नु पर्छ ।
हाम्रा पालामा भएका उपलब्धिहरु र रास्ट्रीय चुनौतीहरु पनि गाउँगाउमा सुसुचित गर्ने काम हामी सबै कांग्रेसजनले गर्नु पर्ने छ । काङग्रेसले भष्ट्रचारको कडा बिरोध गर्ने सामर्थ्य राख्नु पर्छ र सुशासन्को निम्ती जनताको साथ लिएर अधी बढ्नु पर्छ ।अब हामी अतितमुखी हैन भबिष्य मुखी कांग्रेस हुनु जरुरी छ ।काङ्ग्रेस अब शहरमुखी भन्दा गाउ मुखी भैइ कृषी क्रान्ति, पर्यटन बिकास र उर्जा शक्ती लाई प्रोत्साहन दिई हामी जुन क्षेत्र को नेतृत्व त्यही ठाउमा बसेर त्यहाँ को जनता सँग सह्कार्य गरी बाम सत्ताको नराम्रो काम को जनता लाई सुसुचित गर्ने र बिषेश पाठ्यक्रम सहित निरन्तर प्रशिक्षण र अन्तर्कृया गर्नु आबस्यक छ । भातृसंस्थाहरुलाई कुन उद्देश्य ले अनुरुप बनाएको हो त्यही पुर्नसंरचना राखी निर्वाचन र कुनै साना कार्यक्रम को काम मा सिमित नराखी सिर्जनशिल र रचानात्मक कार्यमा पनि बढवा दिनु पर्ने देखिन्छ ।
नेपाली राजनीतिलाई सम्मनित तुल्याउन र नेपाली जनता लाई नेपाली काङग्रेसको पक्षमा पार्ने माथीका उपायहरु केहि सहरानिय हुनेछ्न भन्ने मलाई लाग्छ। जय नेपाल।
लेखकः तरुण दलका युवा नेता हुन।
१३ औं साग पुरुष फुटबलमा भुटानलाई हराउँदै नेपाल विजयी 34 मिनेट अगाडि